Nei kuvhara mapurogiramu kwakaipa kune bhatiri rako? | IPhone nhau
Nei kuvhara mapurogiramu kwakaipa kune bhatiri rako?
Kana iwe ukandiverengera kazhinji, iwe unenge wakwanisa kuona kuti kanopfuura kamwe sei ini ndakayambira kuti kuvhara mashandiro hakungori chete zvisina basa, asi zvakare kushandisa zvisina musoro mashandiro uye nekudaro bhatiri, asi ini handina kumbobvira ndatsanangura zvakajeka chikonzero cheangu chinzvimbo. Zvichida nhasi ndiyo nguva yekujekesa zvandiri kureva nemazwi aya. Vazhinji vane mania iyi yakavakirwa mukati mehunhu hwavo, ndinobvuma kuti ndaifanira kuikunda munguva yangu, semunhu aimbove mushandisi weApple, kwandiri kuvhara maapplication yaive nyaya yekuita kwete kuraira, kusunungura RAM kwaireva yakawanda munguva idzodzo dze = Android Gingerbread. Kune vamwewo vanofunga kuti nenzira iyi vanochengeta bhatiri nekusava nema "open" maapplication, anopenga zvachose, kunze kwekunge zvanyatsojeka, kuti hauna chikamu chezviitiko zvekumashure chakanyatsogadziriswa uye une zvikumbiro zvisina basa zvinomhanya ipapo.
Iyi nzira yakaoma kunzwisisa kupfuura kutsanangura, ini ndinoziva kubva pane zvakaitika. Pfungwa iri nyore, isu tinofanirwa kuputsa tsika iyi, kunyanya kana isu tiri vashandisi veIOS, foni yatotiitira. Kana tichivhara application kubva ku multitasking, kwete chete isu hatichengetedze bhatiri, asi isu tinorinyurura nekukurumidza sezvo Apple ine yeOS inoshanda manejimendi manejimendi ekushandisa ayo asiri kushanda, pamwe nekushandisa zviwanikwa izvo zvinoda kuitwa nemashandisirwo aya, muenzaniso wekuenzanisira ndiSpotify, wakambotora here runyorwa rurefu rwenziyo kuti dzivepo? offline?, Nekudaro, iko kunyorera kuchakuyeuchidza kuti kana kuri kumashure kana pazororo kunomira kurodha pasi mimhanzi, nei? Nekuti iOS haikubvumidze kuti utore zvihombe zvihombe usingave application iri kushandiswa, pane muenzaniso kuitira kuti tinogona kuona kuti zvinongoshanda.
Icho chokwadi chekuti inochengetedza bhatiri kuvhara chaiko ingano uye kwete chete nekuda kwechikonzero icho chandakakuudza, asi zvakare nekuti zvinokanganisa nguva dzekurodha dzechikumbiro icho isu chatakapfiga, ndiko kuti, kana tikanyatsovhara Twitter, isu tichafanira kudzokera kuKuvhura zvizere ichawedzera nguva yekuchaja, kurodha pasi mifananidzo, uye nekudaro shandisa bhatiri rakawanda. Kana tango buda muchikumbiro nekudzvanya kumba, iko kunyoreswa, iko kushandiswa kwe iyo CPU haina kuziva nezve icho chishandiso asi zvepamusoro, kuwedzera kurodha nguva.
Rangarira, iwe unofanirwa kungovhara application zvachose kana chiri application chaunoshandisa zvakanyanya kushoma (uye hazvidiwe kana) kana iko kushanda kuri kumhanya zvisirizvo uye isu tinoda kuitangazve, asi kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvekusimudzira kuita hakusi chete hazvibatsiri, asi zvinomukanganisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nei kuvhara mapurogiramu kwakaipa kune bhatiri rako?
Ini handibvumirani, sezvo zvinoenderana neshanduro yeIOS. Iwe unongoda chete kuita bhatiri yehupenyu cheki nekuvhara uye kwete kuvhara maapplication. Ndakaongorora neIOS 7 uye iOS 8. Iine iOS 7 bhatiri shoma raidyiwa nekuvhara maapplication uye neIOS 8 shoma bhatiri rakapedzwa nekusiya ravhura. NaIOS ini handisati ndaongorora,
Saka kwete multitasker chaiye? kumisa kunyorera nekudzvanya bhatani repamba
Pindura kuna 1122334455
Daniel Ramos akadaro
Pamwe haina kuchengetedza bhatiri asi inosunungura ndangariro.
Pindura kuna Daniel Ramos
Frank Duran akadaro
kuvhara maapplication kunosunungura ndangariro uye kunoita kuti foni iwedzere kuyerera….
Pindura kuna Frank Duran
Ini ndinofunga kuti tsananguro haina kunaka, mumaonero angu. Chikumbiro chaunoshandisa kamwechete pasvondo (semuenzaniso), ehe unogona kuchivhara uye izvi hazvizokanganisa mashandisiro ebhatiri zvachose. Ini ndinobvuma kuti kana zvisina basa uye ichidya zviwanikwa zvakawanda, vhara uye vhura iyo app yaunoshandisa kazhinji (senge WhatsApp). Asi zvirokwazvo unogona kuvhara iwo maapplication aunoshandisa kamwe chete nguva nenguva.
Pindura kuna joan_nadal
Apa ndipo pane iOS isina yakanaka bhatiri manejimendi kana ichichengeta yakavhurika maitiro eemaapp.
uye kana ichifanira kudzidza kubva kune yakawanda inovengwa Android.
MuIOS, maapplication awakashandisa anochengetwa akavhurika, achisiya iyo terminal isina Bhatiri nekukurumidza 🙁
Varombo newbie leeekhaz.
Iyi haisi dzidziso .. Ichokwadi lol
Vaya vasina Jailbreak vanonzwisisa kuti zvinogona kutsamwisa zvakakwana kuve nekushandisa kwakawanda muapp switcher ipapo iyo isiri mu RAM (haina kuvhurwa).
Nekudaro, vashandisi vane JB vane tweak inonzi Springtomize iyo inotibvumidza kuti tione chaizvo kuti ndeapi maapplication akavhurika, uye ayo anovharwa neIOS nekuda kwekudiwa kwezviwanikwa achabvisirwa pane iyo switch switch (pane yakavanzwa nekuti kana iwe ukapinda Safe Mode zvese zvinoonekwa ipapo).
Icho chinhu chakanakisa chinoshandiswa.
Ini handimbo vhara kunyorera, iko kutambisa nguva ZVISINEI ini ndinogona kunyatsonzwisisa kuti vashandisi vane isingasvike 1GB ye RAM, kana zvakanyanya, pasi pe512 MB vanofanirwa kuzviita muzuva ravo zuva nezuva, nekuti ini ndaive mumwe weavo iPod Kubata 4g iyo yaikurudzirwa zvakawandisa kana ndaive nemaapps anopfuura maviri akavhurika, kuti ndiwane kutsetsenura zvaidikanwa kuvhara iwo anga asiri kushandiswa, sekufamba kwenguva ndakaita kusvetukira kumidziyo ine 1GB ye RAM, ini handina ziva kana avo vane hafu RAM vachitambura nedambudziko iri, asi kana vachidaro, zvinogona kurairwa kuti uvavhare nekuda kwezvikonzero zvemvura, mushure mezvose, iOS ichazviita sekondi pamberi kana sekondi mushure mekufunga nezvazvo (kana pamwe kwete, sezvazvakaitika kwandiri).
Uine 1GB kumusoro iyo terminal inokwanisa kubata izvi zvakatsetseka, kunyangwe nemitambo inorema, ita bvunzo uye iwe uchaona kuvhura mutambo uchivhara zvinopfuura imwechete app.
Ndiani anotaura nezvegondohwe, musoro wenyaya ndewe bhatiri, iwe unowanzo kuve newbie, waiitira kupi iko kopi / kunama? OSTIA.
vasina njere akadaro
Mune ino kesi, hazvisi zvese zvakasviba kana zvichena. Kuvhara maapplication kunoshandisa bhatiri uye data, ichokwadi, asi dzimwe nguva unogona kufarira kuzviita kuti uwane kugona kutseterera mumatunhu ekare.
Pindura kune discober
iOS 9 iri kupa matambudziko nePOP email
Iwe hauchakwanise kuendesa ako maapplication ku iTunes ne iOS 9